လက်ပန်းတောင်းသပိတ်ဖြိုခွဲမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မန္တလေးရှိ သံဃာတော်များက နိုဝင်ဘာလ ၃၀ရက်နေ့တွင် မန္တလေးဘုရားကြီးဝင်းအတွင်းမှာ ထိုင်သပိတ်ပြနေစဉ်
ဒီကနေ့ညနဲ့ မနက်ဖြန်ခါ သင့်တော်တဲ့အချိန်မှာ မန္တလေးသံဃာတော်တွေအနေနဲ့ ထိုင်သပိတ်လုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ မန္တလေး၊ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက် ဘဝအလင်းဆရာတော် ဦးသောဘိတက RFA ကို ပြောပြပါတယ်။
လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရေးအတွက် ဆန္ဒပြနေကြတဲ့ ဒေသခံတွေနဲ့ သံဃာတော်တွေရဲ့ သပိတ်စခန်းတွေကို ဝင်ရောက်စီးနင်း ဖြိုခွဲခဲ့ပြီးနောက်မှာ မီးလောင်ဒဏ်ရာ အပြင်းအထန်ရရှိနေရတဲ့ သံဃာတော်တွေဟာ မုံရွာဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှု ခံယူနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ သံဃာတော် (၇) ပါး ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသလို တစ်ချို့သံဃာတွေလည်း ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ မိန့်ကြားပါတယ်။
မန္တလေးသံဃာတော်တွေရဲ့ ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက် ဘဝအလင်းဆရာတော် ဦးသောဘိတကို RFA သတင်းထောက် မငြိမ်းငြိမ်းပြည့်က ဆက်သွယ်လျှောက်ထား တင်ပြထားပါတယ်။
Whoeve responsible for killing innocent and attacking monks and farmers, will go to deep hell together with Nay Win and near dead Than Shwe Regime.
President Thein Sein government should not watch the show play by heathless police or army. Take action and show Burmese national that you are good man. That's all I want to say.
Dec 03, 2012 01:17 PM
Nov 30, 2012 07:21 AM
Nov 30, 2012 05:05 AM
ရဟန်းများကို စော်ကားခြင်းသည် ဘာသာ နှင့် သာသနာ
Nov 30, 2012 04:29 AM
U 陳 Chen David
I am Burmese-Chinese and I am staying in Washington D.C. My name is Chen David. နိုင်ငံတော်သမ္မတ General Thein Sein သိန်းစိန်၊သမ္မတရုံးဝန်ကြီး General Aung Minn ဦးအောင်မင်း၊ Lieutenant General Ko Ko (Minister of Home Affairs of Myanmar) ရာထူးမှ နုတ်ထွက်သင့်သည်။ မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့
…မူလတန်းမှာသင်ကြားခဲ့တာမမှတ်မိကြဘူးလား၊…” ပြိုင်တူတွန်းလျှင်ရွေ့နိုင်ပါသည်တဲ့”…ဝမ်ပေါင် မပြောနဲ့အရပ်သားအမည်ခံ စစ်အစိုးရ (Military Junta) လည်းမခံနိုင်ပါဘူး။
သံဃာတွေလည်းရှေ့ဆုံးကပါနေပြီဘဲ.. I hate Myanmar government's terrorism.
Nov 30, 2012 03:35 AM